Iindaba - Yintoni uthotho lweWPC?
Yintoni uthotho lweWPC?
I-WPC imfutshane ngomdibaniso womthi weplastiki, eyona nto iphambili yi-PE kunye nemicu yeenkuni. I-WPC izonwabela zombini izinto zomthi kunye nezinto zePolymer.Ukuhonjiswa kweWPCyomelele ngokungaqhelekanga kwaye iyaziwa ngobuhle bayo, nobuhle bayo. Besebenzisa ubuchwephesha obuphambili, abavelisi bayakwazi ukulinganisa ukubonakala kwemithi yendalo kunye nelitye kwindawo enexabiso eliphantsi.
1.Ubuhle kunye nobuhle bendalo yokutya ukutya okuziinkozo kunye nokuchukumisa ufakelo olulula, ngaloo ndlela unokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.
I-2.Ingachetywa, ibethelelwe, igrunjwe kwaye isikwe ukuze ilingane izincedisi zeenkcukacha ezahlukeneyo.
I-3.WPC bubungqina obunobumba, ukubola okunganyangekiyo kunye nokwahlula ukuxhathisa.
4.Acid-and-kwealkali-enganyangekiyo, nokumelana, ukufuma ukumelana kunye nezitshabalalisi, ezi ezinye kwangaphambili iimveliso WPC.
Iimveliso ze-5.WPC akukho peyinti, akukho glu kunye nolondolozo olusezantsi, awudingi ukuchitha imali eninzi kuyo!
6.Umgangatho olungileyo wenza i-WPC ichasane nesiliphu, ukuqhekeka okumbalwa kunye nentambo yokuluka, ukunganazi zihlangu, kuyathandwa kakhulu kwihlabathi liphela.
7.Izibonelelo ezilungileyo ziyenza ukuba ibenemozulu elungileyo, efanelekileyo ukusuka kwi-40 ukuya kwi-60 ℃ .So iimveliso ze-WPC zinokusetyenziswa kwi-Iceland ebandayo, ikwayindawo ethandwayo e-Afrika eshushu.
Isongezelelo se-8.Plus UV kwi-WPC, ngoko ke sinokumelana okungcono kwe-UV kunye nokumelana nokuphela, kuhlala ixesha elide.So i-WPC lukhetho olufanelekileyo kuwe nakumthengi wakho.
I-9 Lonke ilizwe libhena kukhuseleko lokusingqongileyo, iimveliso zethu ze-WPC zinobuhlobo kokusingqongileyo, zinokuphinda zisebenze ngokupheleleyo kwaye ayikho enye imichiza eyingozi, ayizukulimaza imeko-bume.
Ngaba Ukuhamba kweWPC Isondlo simahla?
Ukuhonjiswa kweWPC inezinto ezininzi eziluncedo ngaphezu komgangatho wokhuni oluqinileyo lomthi kwaye ngoku iya isiba yinto edume kakhulu. Imigangatho yemveli enezinyango ezinyangiweyo.Ukulungiswa okuphantsi, ungakhathazeki malunga nale nto.Kwakhona amabala asecaleni anokucocwa ngamanzi ashushu anesepha kwaye ibrashi ethambileyo iyafuneka njengesixhobo
WPC decking ngaphandle, WPC decking edityanisiweyo, WPC decking umgangatho, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC nokwadala,